Maxay ka dhigantahay in Maraykanka safaarad ka furanayo Soomaaliya? | Saxil News Network
Image captionMadaxweynaha Soomaaliya oo waraaqaha ka guddoomaya safiirka Maraykanka
“Buur ahoow ama buur ku tiirsanoow” ayuu yiri danjire hore Cabdisalaan Xaaji Axmed oo BBC-da uga waramay muhiimadda ay leedahay in safaaradda Maraykanka dib looga furo magaalada Muqdisho.
Waxa uu xusuustaa xilligii safaaradda koowaad ay haysatay kaalinta koowaad ee tirsiga safaaradaha 30 sano ka hor “Nambar koow ayaa lagu magacaabi jiray safaaradda Maraykanka, mana aysan ka fogeyn wasaaradda arrimaha dibedda”.
Dowladda Maraykanka ayaa shaacisay in markii koowaad muddo 30 sanno kadib ah ay safaaradeedii u rarayso magaalada Muqdisho, iyada oo markii hore kusii shaqaynaysay magaalada Nairobi.
Danjire Cabdisalaan ayaa sheegay in safiirka cusub Yamamoto uu yahay nin waayo arag ah, oo shaqooyin badan Afrika kasoo qabtay, aqoona u leh arrimaha geeska Afrika.
Doorashada Maraykanka oo bilaabatay
Daawo: Sidey Muslimiinta u saameyneysaa doorashada Mareykanka?
Durba waxa uu Maraykanka ku dhawaaqay in baasaboorka Soomaaliga ah la saari doono fiisaha ama dal ku galka Maraykanka, haseyeeshee waxaa weli halkiisii ah amarkii madaxweyne Donald Trump ee mamnuucista xagga socdaalka ee uu Soomaaliya saaray.